Turkiga (Af-Turki: Türkiye) sida rasmiga ah loo yaqaan Jamhuuriyadda Turkiga (Af-Turki: Türkiye Cumhuriyeti; dhageyso) waa dal ku yaal Bariga Dhexe. Xuduudna woqooyiga kala leh Badda Madow iyo Joorjiya dhanka barina Armeeniya iyo Iiraan dhanka koofureedna Ciraaq iyo Suuriya iyo Bada Midatareeniyanka sidoo kale xuduud badeed la leh Qubrus dhanka galbeed Badda Aajen iyo Giriig iyo Bulgaariya. waana xubin ka mid ah Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha Badda Madow.
Turkiga dal cilmaani dimoqraadi ah, xuduudihiisa, Jamhuuriyad dastuuri ah lehna dhaqan iyo ilabaxnimo fog. Turkiga waxa uu noqday mid meel weliba ka dhisan una sii dhawaanaya reer galbeedka asigoo ka mid ah ururro badan sida Golaha Yurub iyo Gaashaanbuurta NATO, Ururka Iskaashiga Horumarka Dhaqaale, Ururka Ammaanka iyo Iskaashiga Yurub iyo xitaa Kooxda Labaatanka (dhaqaalayoowga ugu badan adduunka). Turkiga wuxuu bilaabay wadahadalo ku saabsan ka mid ahaanshaha xunin joogta ah Midowga Yurub, sanaddii 2005 iyadoo la ogyahay in uu ka mid ahaa Suuqa ka dhaxeeya Yurub laga soo bilaabo sanadihii 1963, sanaddii 1995, waxaa la isku afgartay heshiis midowga canshuuraha. Turkiga waxa uu xoojiyay sidoo kale xiriirka Dhaqanka, Siyaasadda, Dhaqaalaha iyo Warshadaha ee Bariga Dhexe, dawladaha turkiga ee Aasiyada Dhexe iyo dalalka Afrika asiga oo ka mid ah ururada sida Golaha Turkiga, iyo maamulka midaysan ee fanka iyo dhaqanka Turkiga, iyo Ururka Iskaashiga Islaamka iyo Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha. Barta uu ku yaal Turkiga waa meel kala bayr u ah Yurub iyo Aasiya kaasoo ka dhigay dal muhim u ah iyo Joyoistaraatiijig. Barta uu turkiga ku yaal ee istaraatiijiga, iyo dhaqaale iyo awood weyn oo ciidan ah, waxa uu ka dhiganyahay awood goboleed weyn.
Waxaa ku yaal gacanka Boosfoor iyo Dardaniil iyo Badda Marmara - kaasoo kuu gudbinaya Badda madow Badda Aajen oo xiriirisa Aasiya iyo Yurub - kulkiisa taasoo ka dhigaysa Turkigu in uu yahay Istaraatiiji saameeye dalalka dhaca Badda Madow. Turkiga wuxuu ahaa xarunta xukunka dawladdii cusmaaniyiinta ilaa sanadkii 1922C.D ilaa laga aasaaso Jamhuuriyadda Turkiga sanaddii 1923 gacantii Mustafa Kemal Atatürk. (SII AQRI)
Maqaallo Xul Ah| Turkiga
'Dhax kujir waa wadan oo laheen wax bad ah. aduunka waxaa ku yaalo, wadamo gaaraayo 44 oo badda ka xirantahay. dowladaha qaarkood kuwa u dhaw badda, waxaa dhacday in ee marki hore badda u furnaan jirtay. Laakinsa marka ee gobolo ka xoroobeen, ee ku soo baxeen, wadamo Dhax kujir ah. tusaale ahaan, xoreentii Eratareya iyo Montenegro, waxee u aqoonsadeen, wadamada Itoobiya iyo Serbia in ee badda arkin. sanadkaan aa ku jirno, badda waa muhiim, markii la fiiriyo, dhinaca dhaqaalaha, iyo kaluumeesiga (SII AQRI)
Taariikhdu Maata Waa 15 Jannaayo 2019 Isuduwaha Waqtiga Caalamiga (UTC) – Hagaaji Bogga
1970 – Dagaal dheer ka dib gobolka Biafra wuxuu ku biiray Nayjeeriya.
1970 – Mucammar Qaddafi wuxuu qabsaday Liibiya.
2001 – Wikipedia ayaa online noqotey.
Waxaa laga keenay "http://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bogga_Hore&oldid=132249"